छलाङ मारेका महामन्त्रीका मुड : विश्वप्रकाश कार्यकर्ताको काँधमा, गगन गाडीमा Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
छलाङ मारेका महामन्त्रीका मुड : विश्वप्रकाश कार्यकर्ताको काँधमा, गगन गाडीमा
तस्बिर : उपेन्द्र खड्का।
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका लागि मतगणना सुरु भएसँगै सानेपामा रहेको कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा भिड थामिनसक्नु भइसकेको थियो। उपसभापतिमा अपेक्षित परिणाम आए पनि उपसभापतिमा अनपेक्षित परिणाम आएकाले महामन्त्रीमा थप चासो बढाएको थियो।
बालकोटको बाल्कोनीमा देखिएको ओलीका दश पोज
प्रधानमन्त्री ओली सन्चै त छन् नि ?
महामन्त्रीमा युवा पुस्ताका तीन नेता तीन समूहबाट प्रतिस्पर्धामा थिए भने वरिष्ठ पुस्ता पनि सँगै मैदानमा थिए। प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल शेरबहादुर देउवाको समूहमा थिए भने मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा शेखर कोइरालाको प्यानलमा। अनि विश्वप्रकाश शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलमा।
उपसभापतिमा संस्थापन र संस्थापनइतर समूहका उम्मेदवारले जितेका थिए। महामन्त्रीमा प्यानल भत्कने प्रारम्भबाटै अनुमान भए पनि २ मतले मात्र धनराज गुरुङले जितेकाले संशय पनि थियो। तर प्रारम्भिक मतगणनाको नतिजाबाटै यस्तै नतिजा आयो। प्रारम्भदेखि नै गगन र विश्वप्रकाशले लिड गरेका थिए। अन्ततिर प्रकाशमानले विश्वप्रकाशलाई भेट्टाउँला झैँ गरे पनि उनले सकेनन् र दुवै जना विजयी भए।
मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै पार्टी कार्यालय अगाडि उभिएका यी दुबैका प्रशंसकहरूले नाराबाजी गर्न थाले। निर्वाचन प्रक्रियाबाट हार र जीत भए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएकाले विजेताले अबिर माला लगाउने संस्कार छैन भनेका थिए बालकृष्ण खाँणले।
सभापतिमा जित्दा शेरबहादुर देउवाले अबिर माला गरेनन्। पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङले पनि गरेनन्। तर प्रशंसकहरूले यी दुवै जनालाई छाडेनन्। पहिला पार्टी कार्यालय पुगेका विश्वप्रकाश हिँड्दै कार्यालय परिसर पुग्दा नपुग्दा अबिरले रँगिसकेका थिए। पछि गगन थापा आउँदा पनि खाँदा,माला र अबिर लागिहाल्यो।
गगनले गाडीमा बसेर प्रशंसकहरूलाई अभिभावन गरे। उता विश्वप्रकाशलाई उनका प्रशंसकहरूले काँधमा बोकेर घुमाइरहेका थिए।
महामन्त्रीका पराजित उम्मेदवारहरू सानेपामा देखिएनन् प्रदीपबाहेक। कृष्णप्रसाद सिटौला प्यानलबाट देउवा समूहको महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका उनी सानेपामा पुगेका थिए। महामन्त्रीमा पराजित हुँदा अनुहार फ्रेस र चहकिलो कसको हुन्छ र ! उनको पनि थिएन।
२०७८ पुष ०१ गते १७:४७ मा प्रकाशित
हनुमान घाटमा स्वस्थानी पूजा [१० तस्बिर]
२०७८ माघ ०६ गते १२:०८ मा प्रकाशित
बिरा, भद्रा र तमसा खोलाको संगम त्रिवेणीमा मूर्ति राखेर एक महिनासम्म पूजा हुने स्थानीय ओम धौभडेलले बताए। ....
रुरु क्षेत्रमा भक्तजन: कोरोनाले छेकेन संक्रान्ति मनाउन (फोटो फिचर)
२०७८ माघ ०१ गते १७:४३ मा प्रकाशित
तर महामारी फैलिएपछि भक्तजनहरू कालीगण्डकी किनारमा स्नान मात्र गरिरहेका छन्। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाको संगमस्थल रुरु....
माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा तरुल र सख्खरको व्यापार (फोटो फिचर)
२०७८ पुष ३० गते २०:४७ मा प्रकाशित
बुटवल स्थित बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा मात्र माघे सङ्क्रान्तिलाई लक्षित गर्दै भारतबाट १५० टन सख्खर....
२०७८ पुष २७ गते १८:१६ मा प्रकाशित
पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर कब्जा गर्दा अन्याय गरेको भन्दै हरेक वर्ष एक समूह त्यो ढुङ्गामा जसरी पनि थुक्ने....
बतासले गरेको बदमासी तस्बिरमा : क्याफ्टेरियाको बहानामा राजा महेन्द्रको बङ्करभित्र रेस्टुरेन्ट
२०७८ पुष २६ गते २१:४५ मा प्रकाशित
समितिले बतासलाई क्याफेटेरिया भाडामा दिँदा गरेको बदमासी तस्बिर सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सोही प्रतिवेदनमा छानबिन समितिले....